एक छिन हासौंन - ९
गजल - ढाट्यो छोराले
नेपाली समाज यूएईको चुनावमा देखिएका केही दृश्यहरु
उदाङ थियो अंग हाबा भई छिल्लिन मन लाग्यो
सिरिङ्ग भो यो तन तिमी सित गिल्लिन मन लाग्यो
मुजा मुजा गाला जिस्काउन थाले ऐनाले पनि
सोह्र बर्षे जोबन पैँचो मागी चिल्लिन मन लाग्यो
ईश्‍वरको फुर्सदको सृजना हो कि कारीगरी हो
सुझ बुझ कहाँ? तिमी हेरी जिल्लिन मन लाग्यो
हर पल दुख्छु बरु मन्जुर भो टन्किने घाऊ नि
स्पर्शको लालचमा पिलो सरी पिल्लिन मन लाग्यो
धन दौलत शान शौकत सब छन नासवान
दाईजोमा केबल तिम्रो त्यो दिललिन मन लाग्यो
धादिङ्ग कटुन्जे (हाल ईराक)
शिशिरको पतझर जसरी तिमीलाइ बाई बाई भनियो
बसन्तको पालुवा जसरी नयाँ वर्ष तिम्रो स्वागत गरियो
भए गरेका पुराना रिस राग बिर्सिएर नयाँ उमङ्ग भरियो
नयाँ खोज र सृजनाको अनुगमनको खोजि तिर लागियो ॥
शब्दको कोशेलीलॆ मायाजाल रच्दै माया फिजाउन थालियो
उपहार के नै छ र सुहाउने मसँग तिमीलाई दिन लायकको
स्वर र व्यन्जन वर्णको शुभकामना तिमीलाई टक्रर्‍याइयो
अमुल्य चिज सम्झि ग्रहण गरि दिनु यो गजल रुपि उपहारको ॥
नयाँ वर्ष शुभकामना तिमीलाई शान्ति र अमनचयनको
संसार भर स्वच्छ र शान्त वातावरण बनाउने आधारको
विश्वलाई उर्जा शिल र बेरोजगार बनाउने साभारको
नयाँ वर्ष शुभकामना छ तिमीलाई नयाँ सोच र बिचारको ॥
खुशीले भरियोस मन सफलताको नयाँ बनोस कहानी
नयाँ वर्षले ल्याओस सबैको जिवनमा सुनौलो विहानी
२००८ को बिदाई २००९ को आगमनको मनोकामना
नयाँ बसन्तको पालुवाले सजियोस भन्ने मेरो शुभकामना ॥ ॥
हुनत नेपाली भाषामा गजल भनेको कुनै नौलो बिधा त रहेको छैन तर राम्ररी हेर्ने हो भने अंग पुर्‍याएर र यसका संरचनाका निश्चित नियम र परिधि भीत्र बसेर लेख्‍नेको संख्या भने निकै कम छ।
गजल पढन र सुन्न जत्ती मनोरन्जक, रोमान्चक र कर्णप्रिय हुन्छ बास्तबमा लेख्‍न त्यत्तीकै जटिल, मुश्किल र दूरुह । दौंतरीमा केहि समय यता यसको बारेमा निक्कै बहस शुरु भएको र म आफू पनि गजल प्रेमी (जानकार हैन भन्ने कुरा पहिलै खुलस्त गरौं) भएको नाताले यो हप्ताको फुर्सदको समयलाई यहि बिधाको सामान्य संरचनाको अध्ययनमा लगाएँ। केहि समय यता दुई-दुई लाईनका तुक मिलाएर लेखिएका भावनाहरुलाई ‘गजल’ भनेर लेखीन र छापिन थालिएका छन । दौंतरी मात्रै हैन, धेरै अनलाईन र सहित्यिक पत्रिकाहरुमा समेत गजलको नाममा कविताहरु धेरै पटक प्रकाशीत भएका छन ।
गजलको उद्गम र परिभाषा बारेमा भिन्न भिन्न मत भएपनि गजल अरबबाट शुरु भएको अनी बिस्तारै काव्यको यो विधा फारसी, उर्दू हुँदै हिन्दी, नेपाली र अन्य भषामा पुगेको कुरामा धेरै शोधकर्ताहरुको एक मत छ ।
यो सानो पोष्टमा गजलसंग सम्बन्धित केहि आधारभूत शब्दावलिको चर्चा गर्ने कोशीस गरिने छ।
साधारणतया गजलका यि शब्दाबलीलाई अर्थ्याउन गालिब वा जफर गोरखपुरी वा त्यस्तै कोहि प्रख्यात गजलकारका गजललाई प्रस्तुत गरिन्छन। तर ति सबै उर्दू वा अन्य कुनै भषामा हुने भएकोले म हाम्रै दौंतरी वाकाजीले भर्खरै पोष्ट गर्नु भएको यौटा सरल गजल यहा राख्दैछु:
शेर: गजल शेरहरुको समुह हो र गजलमा प्रयुक्त दुई हरफकको यौटा श्‍लोक लाई शेर भनिन्छ। गजलको बनोटको हिसाबले एउटा गजलमा कममा पाँच र बढिमा एघार ओटा सम्म शेर रहेको पाईएको छ। जहाँ कविताका १०-१२ हरफसम्म यौटै विषयको बारेमा व्याख्या हुनसक्छ, तर गजलमा भने हरेक शेरले भीन्दा भीन्दै कुरा बयान गर्छ। यसैले हरेक शेर आफैमा पूर्ण हुनु पर्छ, यौटा शेरमा पुरा गर्न नसकिएको विषयबस्तुलाई अर्को शेरमा हाल्नु वा तान्नु हुँदैन।
मिसरा: शेरको प्रत्यक लाईनलाई मिसरा भनिन्छ। त्यसमा पनि पहिलो लाईन, जुन पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छ लाई मिसरा उला (मिसरा ए उला) भनिन्छ भने दोस्रो लाईन, जसमा तुक मिलाउने मात्रै नभई गजलकारले आफ्नो अधुरो कुरालाई दमदार तरिकाले पुरा गर्छन लाई मिसरा सानि (मिसरा ए सानी) भनिन्छ ।
जस्तै माथिको गजलको पहिलो शेर:
कस्ले लायो साँद आज, भुत्ते पनि छुरा भएछ , कस्को आड पायो कुन्नी लुते पनि सुरा भएछ मा “कस्ले लायो साँद आज, भुत्ते पनि छुरा भएछ ” भन्ने हरफ मिसरा उला हो भने “कस्को आड पायो कुन्नी लुते पनि सुरा भएछ” भन्ने दोस्रो लाईन मिसरा सानि हो।
काफिया: यो गजलको एकदमै महत्वपूर्ण अंग हो। यदाकदा यसलाई गलको मुटु वा ज्यान पनि भनेर परिभाषित गरिन्छ। काफियाको शाब्दिक अर्थ पछि पछि आउनु भन्ने हुन्छ । माथिको गजल हेर्दा ‘सुरा’, ‘छुरा’, ‘पुरा’ आदि शब्द, जुन हरेक मिसरा सानिमा पछिल्तिर आएका छन र फरक-फरक छन, लाई काफिया भनिन्छ । गजलमा साधारणतया अर्थ फरक आउने शब्द अपबाद हुने बाहेक उहि अर्थ आउने काफियाको प्रयोग गरिदैन। हुनत केहि नाम चलेका गजलकारहरुले पनि काफिया दोहर्‍याएर गजल लेखेका छन, तर हरेक शेरमा भिन्न भिन्न काफियाको प्रयोगले नै कुनै पनि गजलकारको भषीक ज्ञान, प्रखरता, र प्रतिभाको पूर्ण प्रदर्शन गर्छ । अनी दोहोरिएको काफियाले गजलकारको मात्रै हैन, जुन भाषामा गजल लेखिएको छ त्यो भाषाको शब्दकोषको समेत गरिवि पनि झल्कयाउँछ । त्यसैले काफियालाई तुक मिलाउने मेसोको मात्र उपयोगीतामा हेर्नु गल्ति हुनेछ ।
रदीफ: काफिया संगै आउने शब्द वा शब्द समुहलाई रदिफ भनिन्छ । जुन शेर पिच्छे बदल्न मिल्दैन र गजलको अन्त सम्म अपरिवर्तित रहन्छ। जस्तै माथिको गजलमा: “कस्ले लायो साँद आज, भुत्ते पनि छुरा भएछ, कस्को आड पायो कुन्नी लुते पनि सुरा भएछ” मा ‘भएछ’ रदिफ हो, जुन अन्तसम्म एउटै छ ।
मत्ला: मत्लाको शाब्दिक अर्थ “आरम्भ” वा शुरुवात भन्ने हुन्छ, अत:कुनै पनि गजलको पहिलो शेरलाई मतला भनिन्छ । जस्तै माथिको शेरमा: “कस्ले लायो साँद आज, भुत्ते पनि छुरा भएछ , कस्को आड पायो कुन्नी लुते पनि सुरा भएछ” भन्ने शेर यो गजलको मतला हो। यहा याद गर्नु पर्ने कुरा के छ भने मतलाका दुबै मिसरामा काफियाको प्रयोग भएको हुन्छ। तर गजलका अन्य शेरमा भने मिसरा सानिमा मात्रै काफिया हुन्छ ।
मक्ता: मक्ताको अर्थ समाप्त हुनु हो, अर्थात जुन शेरबाट गजल अन्तहुन्छ गजलको त्यहि अन्तिम शेरलाई मक्ता भनिन्छ।
तखल्‍लुस: प्राय गजलकारहरु गजलको मक्तामा आफ्नो नाम, उपनाम वा टाईटलको प्रयोग गर्छन। अर्थात अन्तिम शेरमा आफनो नाम पनि गजल भित्र हाल्छन, यसैलाई लखल्लुस भनिन्छ । यसले त्यो गजल कस्को हो भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ भने आर्को कुरा तखल्लुसको प्रयोग कहिले काहि द्विअर्थि समेत हुँदा यसले सिधै गजलकारको नाम मात्रै नभई अरुनै कुनै संकेत वा ईशारा पनि गर्न सक्छ । अनी कतिपयले भने तखल्लुस सहितको अन्तिम शेरलाई मात्रै मकताको दर्जा दिने गरेको पनि पाईन्छ ।
यो गजलको बारेमा एकदमै साधारण जानकारि मात्रै हो यसका मानक र संयोजनका अन्य पक्ष जस्तै: बहर, रुक्‍न, वज्‍न आदि बारेमा पनि यथेष्ट ज्ञान भएमा सोहि अनुरुप लेखीए मात्रै गजलमा उत्कृष्टता आउन सक्छ, नत्र बेजोड भाव, समानान्तर तुक र गेय भएपनि काव्य, गजल नबनी कबिता मात्र हुने वा कहिले काहि न कबिता न गजल भै बिचमै लटकिन पनि सक्छ ।
समयले साथ दिएमा त्यस बारेमा आगामी पोष्टमा लेख्‍ने प्रयास गर्ने छु । आजलाई भने जाँदा जाँदै गजल सम्बन्धमा केहि रमाईला तथ्य र किम्बदन्तिहरु:
यौटा किम्बदन्ति अनुशार अरबमा एकजना ‘गजल’ नाम गरेका शायर थिए जसले प्रेमको गित बनाउनमै आफ्नो जिवन बिताए। शुरु शुरुमा गजल केवल प्रेमको बारेमा मात्रै लिखिन्थ्यो त्यसैले पछिका दिनमा यस प्रकारको प्रेमको गित नै उसैको नामले चिनिन थाल्यो ।
दसौं शताब्दिमा ईरानमा जन्मेका ‘रौदकी’ नामका शायर (जो जन्मजात अन्धो रहेको बिश्वास गरिन्छ) लाई नै गजलको जन्मदाता पनि मानिन्छ ।
उर्दूका प्रशीद्ध शायर जानिसारले गजललाई:
“हमसे पूछो कि ग़ज़ल क्या है ? ग़ज़ल का फन क्या है ?
चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए ।” भनेर परिभाषित गरेका छन ।
गजल अरबि शब्द हो र यसको माने नारि शौन्दर्यको वर्णन वा प्रेयसीसंग प्रेमालाम भन्ने हुन्छ ।
मतला बाहेकका बिचका कुनै शेरमा पनि दुबै मिसरामा काफिया राखेर लेखीएको शेरलाई ‘हुस्‍न‍-ए-मतला’ भनिन्छ
केहि साल यता अंग्रेजिमा पनि गजल लेखन थालीएको छ (भाषा फरक रहे पनि केहि अंग्रेजी गजल पढदा मलाई भने समान आकर्षक र रोचक लाग्यो)
Posted by: ठरकि दादा Labels: शोध/ अध्ययन
खै!अनुभव र अनुभुती पोख्दा पोख्दा अब त अर्को नयाँ अनुभुती को आभाष भै रहेछ किन भने मान्छे जन्मे देखी उस्ले होस सम्हालेसम्म उस्ले नयाँ नयाँ कुराहरुको अनुभुत गर्न पाउछ। सुख,दुख आसुँ,हांसो,खुशी पीडा इत्यादी। यत्ती हो कसैले पोख्न सक्छन कबिता,गीत,गजल,कथा अर्थात अनेक साहित्यको माध्यम बनाएर। मैले भने यस् दौतरीको छात्तिमा अनुभुतिको लश्कर बनाएर पोखिरहेकी छु। कत्तिलाई मनाशिव होला पनि कत्तिलाई वहियात पनि भएको होला त र यो मेरो आफ्नो अनुभव हो पोख्ने अधिकार मलाई छ। यसैले म निर्धक्कसँग समय चोरि चोरी पोख्न लालायित छु।
हुन त साहित्य नै यस्तो निस्वार्थ, अनमोल,निस्कलंक बस्तु हो, जस्को न मोलतोल नै गर्नु पर्छ। जस्लाई प्रयोग गर्न न कसैलाई बिन्तिभाउ नै गर्नु पर्छ, न त यस्को छेकवार नै छ। बस पोखिदियो यस्को माध्यम बाट आफ्ना मनका भावनाहरु छताछुल्ल बनाएर। यसैले मैले पनि आफ्ना अनुभव हरु पोखिरहेकी छु। त र धेर खायो भने गुँड पनि तितो हुन्छ रे। यसैले भोगिएका देखिएका सबै कुराहरु पोखेर साध्य पनि हुन्न। यसघडी मलाई आफ्नो जीवन भोगाइ अर्थात बचाइ सपना जस्तो लागिरहेछ। मेरो समय केवल काम र लेखनमा मात्र सिमित छ त्यसैले पनि म सपनामा छु जस्तो आभाष भै रहेछ। अब आउने मेरो अनुभुती अन्तिम हुनेछ शायद। यो अन्तिम अनुभुती चाँही यही अनुभुती लेख्नेक्रममा मैले भोगेका र समय चोर्नु परेको बाध्यता एउटा हास्यस्पद कथा बनेर आउनेछ। साचै मान्छेलाई नचाहेर पनि ढाट्नु पर्ने,झुठो बोल्नु पर्ने,भाग्नु पर्ने डराउनु पर्ने,गाली पनि सहनुपर्ने वाध्यत्ता हुदोरहेछ। अहिले मेरो पनि त्यस्तै अवस्था छ किनकी महँगो समय छ। एक एक पल समयलाई किन्नु परेको छ। अनी आफ्नो लेखनक्षेत्रको मोहलाई पनि पूरा गर्नु पर्नेछ। भावना हरु लाई गुम्साएर राख्न म असमर्थ छु त्यसैले पनि कलम मेरो साथी बनेको छ किन कि परदेशको ठाउँ यहाँ सबै पराइ छन। त्यसैले पनि मन कहिलेकही बिचलित बन्छ। यही एउटा माध्यम छ मनलाई शान्त्वना दिने। हुनत म मात्र त्यस्तो नहुला सबैले यसरी पोख्न समर्थ हुँदैनन। सबैले साहित्यको भर पर्न असमर्थ छन। त्यसैले त होला यहाँका मान्छेहरु प्राय:एक्लै गुनगुनाइ रहेका,एक्लै हासिरहेका,कता कता हराएकाजस्ता भएका। शायद ब्यथामात्र साथी भएर हो कि?, यसैले पनि मैले भने अनुभुत गर्ने ठाउँ दौतरी सगं मागे। धन्यवाद दौतरी। भावना पोख्ने आङन दिएकोमा। अब एकचोटीकोलागी फेरी तिम्रो बलेशिमा भावनाको आँशु बनेर झर्ने अनुमती माग्दै बिदा चाहन्छु ।
मकवानपुर फापरबारी-२ सिक्रे दोभान नेपाल
मनको ढोका खोलेको थे तिमी लाई भिन
सर्बस्व सुम्पेको थे तिमीलाई आफ्नो ठानी
बिर्सी गयौ आजा तिमी मलाई एक्लो पारी
ओढाई गयौ जीन्दगीमा ठुलो काँडा घरी
मनको पिडा आपैसँग लुकाई राख्ने छ
भित्रीमन जलाई जलाई आपै जिउने छु
आँसु पिउदै जीन्दगीलाई मोडमा ल्याउने छु
जिवनको अन्तिम दिनलाई गन्दै बस्ने छु
किन दियौ छोटो हाँसो जिन्दगीमा आई
दुनियालाई देखाई छाड्यौ धोका मलाई दिई
ठुलै कुरा पायो होला मलाई छाडि गई
सुखै सुख पायो होला अरु साथमा लिई
बागिएको खोला हुं मा कहिल्यै फर्किदिन
जिन्दगीको बोझलाई हेरी हहिल्यै झर्किदिन
तिमलाई भेटे बाटोमा कहिल्यै तर्किदिन
तिमले बोले सुनि बस्छु बोली फर्काकाउदिन
तिमीले त सुख छान्यौ मलाई दुखमा पारी
के नै ठुलो कुरा पायौ मलाई जीउदै मारी
ठुलै सम्मान पायो होला मलाई अपमान गरी
बाँच्न बाध्य बनाई दियौ पानी बिना माछा सरी
पीर, चिन्ता छ मेरो यो मनमा
बाच्नु नै पर्ने जे जस्तो भएपिन
यो जिन्दगी कस्तो मेरो
सल्केको आगोको धुवा जस्तो
आशा सबै मरी सक्यो मेरो
बिरानो लाग्छ जिन्दगी मेरो
छैन कोही आशु चुहाउने
म मरॆ पछी मेरो लासमा
आज धेरै दिन पछी उस्ले
पछाडि फर्की हेर्यो
कालो बादल पछ्याउदै रैछ्
दिन को उज्यालोमा रमाइरहेको उ
कालो रात ले दिन को अस्तित्व थिचेको पायो
जब उस्ले आज जीवन को खाता पल्तायो
सन्तति को भबिस्य बनाउन गांस काटि काटी
दोउडिराखे को उ
बुडा आमा बाबु को आसुँ ले
डुबाइ सक्न आटेछ उस्लाई
बल्ल थाहा पायो आज
आम्दानि भन्दा धेरै रिण को भार भेछ
न त तिर्न सक्यो पुर्खा को लगानी
न त भर्न सक्यो ममतामा मा लागेको घाऊ
बुढ्योउली को सहारा बनी
बेखबर दोउडी रह्यो आकाश नै छुन्छु भनी
बाटो टाढा छुटी सकेछ
आज खाता पल्टाउदा खेरी
भोउतारी रह्यो एता र उता
तेरो र मेरो को युध्ह भुमी
शिथिल जिर्न शरीर माथि
मृत्‍यु को कोटा परिसकेको
बल्ल चाल् पायो
जब खाता खोल्यो धेरै दिन् पछी
आज आँखा बन्द गरी
सुन्यता मा झर्न खोज्यो
सुस्ताएको चिसो मुटुमा
रोएका फुल का पत्ता हरु
बेखबर टाँसिएको पायो
आज फेरी खाता हेर्यो
सुन्य सुन्य र सुन्य मात्रा पायो
त्यसदिन म दुखित भएँ, कारण त्यस साहित्यिक कार्यक्रमको उपस्थितिमा एउटा फुचे केटाको ब्यङ्यात्मक र अस्वभाविक प्रश्नहरुले मलाई कता कता आफ्नो लेखकिय बिधाको परिचयबाट बन्चित बनाएझै महशुश भयो (जो केटा नेपाल बाट भर्खर मात्र अमेरिका भित्रिएको रहेछ )हुन पनि त यो ब्यस्त दुनियाँमा आएर म ब्यस्तताभित्र हराएकी छु मैले यहाँ आफुलाई समय र कमाइको रफ्तारमा मात्र दौडाइ रहेकी छु। कहाँ फुर्सद र ?भावना र कल्पनालाई सप्तरङी इन्द्रेणिको माला बनाएर साहित्यको भंडार् भर्ने ?। अनी कस्को समय छ र साहित्यिक परीवेश भित्र हराउने ? अनी आफ्नो अस्तित्व कहाँ खोज्नु र पाउनु मैले ? । यस्तै यस्तै प्रश्न र दुबिधामा अल्झिएर आफ्नो अतित मा हराउन पुग्छु म । दु:ख ,पीडा, समस्या ,अभाव साथ नै भए पनि लेखन क्षेत्रमा आफु रमाएको आफुले अरु बाट पाएको सम्मान ,एउटा छुट्टै अस्तित्व, आफ्नो बेग्लै छवी तर आज गास,बास, कपासको राम्रो बन्दोबस्त भएपनी सम्पन्नता र बैभव को लिस्नो चढि रहेता पनि आफ्नो लेखकिय अस्तित्व गुमेर त्यो फुच्चे केटाले गरेको ब्यङ्यातमक पर्श्नहरुले म कता, कता मर्माहत बन्न पुगे र सम्झिन थाले उस्का ब्यङ्यात्मक पर्श्नका लहरहरु ।
''तपाइ लेख्ने मान्छे हो र ?''
''खै त मैले नेपालमा तपाईंको नाम सुनिन त ?''
''खै तपाईं के के लेख्नु हुन्छ ?(ब्यङ्यात्मक भाव ले मेरो डाइरी तान्दै पल्टाउन थाल्छ )
म पनि बिच बिच्मा उस्का पर्श्नका जवाफ दिरहेकी हुन्छु ।
''तपाइ ले गीत पनि लेख्नु भएको रे ?''(अलिक अगाडि मैले अर्को ब्यक्तिसँग कुरा गरी रहेको सुनेर उस्ले त्यस प्रकारको प्रश्न मलाई गरिरहेको थियो )''क- कस्ले गाएकाछन त तपाईंका गीत हरु'' भन्दै ब्यङ्यात्मक हासो उडाउदै अहिलेका केही चर्चित एक दुई वटा ब्यान्ड हरुको नाम लिन्छ । म मध्यम बर्गका गायक हरुको नाम लिन्छु ।''ए तिनिहरु त हराइ सके'' भन्दै ब्यङ्यात्मक हासो उडाउछ अनी फेरी उस्ले त्यसरी नै अर्को प्रश्न तेर्स्याउछ ''तपाइ त्यो अहिलेको बरिष्ट लेखक ……लाई चिन्नु हुन्छ ?भनेर उस्को नाम लिन्छ अनी म झन अवाक बन्छु त्यो फुचेले जस्को नाम लिएको थियो ऊ त्यही केटो थियो जस्लाई मैले मेरै घरमा साहित्यिक परीवेश बनाएर साहित्यिक गोस्ठिहरु गरी एउटा लेखक बन्ने प्रेरणा दिएकी थिए र फल स्वरूप उस्को प्रतिभामा अंकूर पलाई रहेको थियो।
म हर्षले बिभोर पनि भएं किन कि मैले उत्साह र प्रेरणा दिएको केटो यौटा बरिष्ट लेखक मा गनिएको सुन्दा त्यस्ता हजारौ युवाहरुको म प्रेरणाको श्रोत थिए तर आज त्यो फुच्चेले मेरो औकात तौलिएर यदी त्यो बरीष्ट लेखकलाई चिने भने मात्र म यौटी लेख्ने महिला हुँ भन्ने उस्को भाव ले पर्श्न गर्दा साचै म अवाक बने। मैले साँच्चै आफुलाई अती नै ओझेल मा धकिलिएको महशुश गरे र आँफैलाई धिक्कारे अनी सोचें, साच्चै म आफ्नो सानो देश र ठाउँमा यौटा चम्किलो तारा नै थिए भने आज यती ठुलो देशमा आएर धुलोको कण समान नै भैछु । अनी त्यो फुचे केटोको पर्श्नलाई मैले सकारात्मक् नै ठाने, हुन पनि त हो; अमेरिका आएको चार बर्ष भयो उस्ले मेरो नाम कहाँ बाट सुनोस ?अनी कसरी मेरो परिचय् पाओस यहाँ आएर मेरा लेख्ने हातहरुले कलम को मोह बिर्सिएर पसिना को मर्म मात्र बुझ्न थालेका छन अनी कसरी म लेखिका भएको प्रमाण कसैले पाउनु ? । हो, अहिले म आफ्नै रेस्टुराँको ''गूड् वेटरेस '' भएकी छु सबैलाई बाड्ने मीठो भावनात्मक शब्दहरुको बद्लामा ग्राहक हरुलाई मीठो मुस्कान छर्दै ''नमस्ते ''को सट्टा मा ''हेल्लो हाउ आर यू ?' 'भन्ने ब्यवसायिक वाक्य मात्र बाड्न सक्षम भएकी छु। मेरो परिचय् ''राईटर्''बाट ''वेट्रेस'' मा अनुवाद भएको छ । आजकल राम्रो लेखिका बाट ''गूड् वेट्रेस'' भन्ने प्रशङ्सात्मक शब्दहरु पाउन थालेकी छु ।
हो, मेरो परिचय् यही भएको छ। मैले नौलो पहिचान पाइरहेकी छु पुरानो अस्तित्व बाट म ओझेल भाईरहेकिछु, अनी म फेरी त्यो फुच्चेको प्रश्नहरुलाई आत्मसात गर्न पुग्छु। साच्चै, यथार्थ मा उस्का प्रश्न हरु सहि थिए भन्ने मलाई भान हुन्छ यस्तै कल्पनामा म हराइ रहेको बेला अनायस एउटा ग्राहक को वाक्यले म झस्किन्छु उस्ले भनी रहेको हुन्छ ''मे आइ गेट सम मोर वाटर ''? । म हठात को साथ जग को पानी उठाएर उस्को ग्लास भर्न पुग्छु उस्ले हाँस्दै ''थ्यान्क् यू'' भन्छ म उस्लाई ''वेल काम ''भन्दै अरु टेबलमा पाहुना हरुसँग मुस्कान साट्न थाल्छु ।
छिटै भेट हुने बाचा गरी दिएर विदा भएको थियौ
सुर्य चन्द्रको रफतारमा तिमीलाई भेट्ने पर्खाइमा बसेका थियौ ॥
तिमीलाई सिङ्गारिदिन पाउदा यो मन हर्ष र खुशिले रमाउने थियौ
तिम्रो आगमनमा सारा सन्सारको मुहारमा खुशि ल्याएकॊ थियो
रिस र रागलाई छाडेर शान्तिको बिगुल फुक्ने अशिक दिएका थियौ ॥
सधै भरि तिमीलाई सिङ्गार्ने आशा राखेका थियौ
सबैलाई नयाँ सोच र जागरको सृजना गराई दिएका थियौ ॥
सन्सारमा नै परिवर्तनको दियो जलाई दिएका थियो
जन्म दिनको शुभकामना हामी सबैले दिएका थियौ ॥
गणतन्त्र आएपछि गणहरु गणपति हुनेछन् भन्ने जुन भावना जनतामा उर्लिएको थियो माओवादीको असफलता र अन्य राजनीतिक दलहरुको सत्तालिप्सा देखेर गणरुपी जनतामा नैरास्यता छाएको छ । गणपति त गण होइन नेता पो बनेका छन् । यो कस्तो गणतन्त्र हो जसको मालिक नेता बनेका छन् र जनता फेरि दासभन्दा खराब जीवनयापन गर्न बाध्य बनिरहेका छन् । यो त गणतन्त्र होइन गलगाँड पो हुनथाल्यो । जस्ले जे जस्तो तर्क दिए पनि तीतो सत्य के हो भने बोकाले दाईं गरेर हुन्न भन्ने बुढापाकाको कथन नेपालमा सावित भएको छ । ०४६ सालमा पनि महेन्द्रको सालिकअगाडि एमाले कांग्रेस माओवादीभन्दा उग्र भएका थिए । तत्पश्चात भयो के त भने कांग्रेस र एमालको अधिनायकवाद चल्यो । गिरिजा त्यसबेला जंगेजस्तै बनेका थिए । राष्ट्र र जनतालाई ढाँटेर महाकाली सन्धिमात्र गरेनन् चित्त नबुझेका छत्तीसेलाई सत्ताच्युत गर्न जनताको सदन भंग गरिदिए ।
संसदीय ब्यवस्था र प्रजातन्त्रको धज्जी उडाउनेमा माओवादीभन्दा कांग्रेस र एमाले नै अगाडि छन् । समय फेरियो माओवादीको रणनीति सफल भयो । संसदीय प्रजातान्त्रिक पक्षधर अर्थात २०४७ को संविधानले स्थापना गरेको संरचनाको पत्तन भयो । त्यससँगसँगै पुराना सयौं परंपरागत संरचनाहरु कतै जोसमा कतै सडकको दवावमा कतै सत्ताको लालचमा भत्काईंदै गए । यहाँसम्म कि शून्य राजनैतिक संरचनाको अवस्थामा झर् यो । माओवादीको सत्ता आयो शासन आयो नयाँ नेपालको कुरो आएको छ तर प्रस्थान र गन्तब्यको विन्दूको चुरोसम्म पहिल्याउन सत्तासिन र विपक्षी दलहरु असफल भएका छन् ।
संविधानसभाको माध्यमबाट जनताको प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाई नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने भन्ने माओवादीको माग र अन्य दलको अभिष्ठ स्वयं उसकै लागि घाँडो किन भयो बुझ्न कठिन हुँदैछ । अनुमान केसम्म गर्न थालिएको छ भने कि त माओवादीलाई ब्यालेट मार्फत सत्तामा पुगिएको नसा उत्रिएको छैन कि त लोकतन्त्रप्रति विश्वास नै छैन । या कहिले काहीं नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएकै विहारी शैलीको लोकतन्त्रु नै हो त ।
माओवादीको सत्ता चलेको पनि ४ महिना भइसक्यो । केही उज्यालो सत्ता हात पारेको माओवादीले अन्धकार बनाईदिएको छ । यो अन्धकारशैली नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुन मोडल हो जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । मस्र्याङ्दी उद्घाटन गरेकै भोलीपल्टदेखि ६ घण्टाबाट १० घण्टा पुगेको लोडसेडिङ् अव १८ घण्टा हुन्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु भन्न थालेको छन् । यस्ता कालो अँध्यारोमो विद्यार्थीले कसरी पढ्ने उद्योगधन्दा कसरी चलाउने नयाँ नेपाल कसरी बनाउने स्थिति भयावह बन्दै गएको छ ।
हिजो डा.बाबुराम भट्टराईको लेखअनुसार निलम्बित राजालाई सम्झौताको नाममा पुनस्थापना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । त्यो पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रवादी र गणतन्त्रवादीको दह्रो मोर्चा बनाउने कुरा गर्न थाल्नु भएको छ । कतै राजालाई पनि त्यही मोर्चामा आउन दरखास्त हालिएको त होइन यता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वपाचहरुको तीनवटै पार्टी र अन्य प्रजातन्त्रवादीलाई मिलाएर अधिनायकवादलाई परास्त गर्न बृहद प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन गर्ने सुरसार कस्नासाथ प्रचण्डको मोर्चाको कुरा उठ्नुले राजनीतिक क्षेत्रमा तापक्रम एक्कासी बढ्दै गएको छ । दलीय राजनीति तातेको छ ।
यही बेलामा भारतीय राजदूत राकेश सुदले राजालाई सोल्टी होटलको गोप्य कोठामा गोप्य भेटघाट गरेको समाचारले राजनीतिमा ज्वारभाटा ल्याइदिएको छ । किन भेटे सुदले के भने सुदले राजाको प्रतिकृया के थियो अन्दाजका अनेक रिङ्गटालाग्दा कथाको पटाक्षेप हुनेक्रम जारी छ । त्यो पनि एकसेएक लोकतान्त्रिक दलका मुखपत्रहरुबाट । कसै कसैले त यतिसम्म लेखे कि राजाले भारत भ्रमणको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेरे । कसैले सग्लो देश हेरेर मर्ने इच्छा व्यक्त गरेको विषयलाई बढी महत्व दिएर प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
आखिर पूर्वराजा पनि यही देशका नागरिक हुन् । हिजो पनि उनले देशको माया गरे आज पनि देशको माया गरिरहेका छन् । यो देश छोडेर कतै जान्न भन्ने पूर्वराजाको अभिव्यक्तिले र यही देशमा चुपचाप बसेका राजाको व्यवहारले पूर्वराजाको लोकपि्रयता र जनताको सहानुभूतिलाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ ।
खासगरी प्रचण्ड सरकारको असक्षमता र नालायकीपनका कारणले पूर्वराजातिर फर्केर हेर्न जनता बाध्य भएका छन् । जतिपनि कूसंस्कार र कूलक्ष्यणहरु देखिएका छन् ती सबै राजतन्त्र हटाउनाले हो भन्ने छाप जनताको मनमा परिसकेको छ । हो राजतन्त्रबाट अनेक गल्तीहरु भएका होलान् तिनलाई सच्याएर अखण्ड नेपालको जगेर्ना गर्न सकिन्थ्यो । राजतन्त्र फाल्नेले आफु पनि सच्चिन सकेनन् पवित्र भएनन् राजतन्त्र पनि फालेर देशलाई बर्बादीको भूमरीमा होमिदिएका छन् । यसैका कारणले विदेशीको खेल मैदान बनिसकेको छ नेपाल । राजतन्त्र फालेपछि चमत्कार गर्छु भन्ने प्रचण्डले देशलाई अँध्यारो युगमा धकेलिदिए । यही हो चमत्कार जनता आहत भइरहेका छन् जनताले राहत पाइरहेका छैनन् यही हो चमत्कार असमानता र बिखण्डनका आवाजहरु उठिरहेका छन् यही हो चमत्कार ज्वाला सिंहले टोपी जलाउन थाले मधेसबाट पहाडीया नभागे भौतिक कारवाही गर्ने हुकुम जारी गरिसक्यो अव नेपालको झण्डा जलाउने कार्यक्रम पनि ल्याइसक्यो । हुँदा हुँदा तमलोपाले एक मधेस एक प्रदेश हुँदैन भने एक नेपाल पनि रहँदैन भनिसके । यही हो चमत्कार यदि यस्तै अराजकतालाई चमत्कार भन्ने हो भने नेपालीका लागि प्रचण्ड चमत्कार दुर्भाग्य बाहेक केही हुने लक्ष्यण देखिदैन ।
पूर्वी र पश्चिमी पहाड र तराईतिर अनेक जातजातिहरु स्वशासनका माग गरेर सेना संगठित गर्न थालेका छन् । खासगरी पूर्वी पहाडको लिम्बु र पश्चिम तराईको थरुहठ सेना डरलाग्दो सशस्त्र समूहका रुपमा अगाडि आएको छ । यिनलाई व्यवस्थापन गर्नु चानचुने चुनौति हुनसक्दैन । चुनौति अनेक छन् दलहरुमा मतभेद चुलिदो छ । गणतन्त्र गलगाँड भयो देश र जनताका लागि ।
मैल्र अगाडि अन्धोहरुको कुकुरले उनिहरुलाई रखवारि गेरेको सम्बन्धमा कुरा निकालेकी थिएँ।कस्तो अचम्म!, उनिहरुले त्यत्ती मीठो मीठो खाइरहँदा पनि त्यो कुकुरले आक्रमण नगरेको! चुपो लागेर कुर्सीमुनी बसिरहेको देख्दा मलाई त अचम्म नै लाग्दथ्यो अनी म पूरानो घट्ना सम्झन्थे।
एक पटक कुकुर तिहारको दिन मेरी सासु आमाले घरमा पालेको हाम्रो पनि ज्यादै प्यारो कुकुर ''जिनो'' त्यस्लाई पूजा गर्न भनेर माला गासेर, मीठो मीठो मासुको परिकार पकाएर 'जिनो' लाई काखमा राखेर सुम्सुम्याउदै पूजा गर्न लाग्नु भएको मात्र के थियो त्यस्लाई त मासु खान हत्तार भएछ त्यस्तो प्यारो गरेको कुकुर र अरु बेला त्यस्तो इमान्दार मानेको कुकुरले आमाको हात नै ख्याप्पै पारेर टोकीदियो अब परेन फसाद !। कताको कुकुर तिहार ?, त्यस्तो रमाइलो वातवरण पनि भताभुङ भयो। अब दुई देशको कुकुरमा नै तुलना गरौ न, अनी हामी मान्छेको त के कुरा रह्यो र ।
धत!म त खाली कुकुरको पछी नै लागिछु। अब छाडिदिउ यस्ता कुकुर,बिरालाका कुरा। अब के गर्नु त? अरुलाई कुकुर,बिरालो नै मन पर्छ भने र उनिहरुको पशु नै इमान्दार छन भने के खाचो त ?हाम्रो देशमा हामी नै इमान्दार बनौ न त ?। किन कुकुर बिरालोको बाटो हेर्ने ? उनिहरुलाई पनि त वाक्क लाग्दो हो नि त?सधै बन्धनमा बस्दा बस्दा कत्ती दिन को रिस पनि त मौका पाएको बेलामा फेरेको होला नि त ? मान्छेले त मौका को फाइदा उठाइहाल्छन भने पशु त पशु नै भै हाल्यो नि। हामीले पो उनिहरुको भाषा,पीर,मार्का बुझ्नु पर्दछ त !त्यसै त उनिहरु रिसाउदैनन नि। हामी यस्तै अबुझ भएर त एक-आर्कामा दुश्मनी मोल्ने,असमानताको नजरले हेर्ने भएर पनि हामी सबै कुरामा पछी परिरहेछौ त्यसैले एकार्काको पीरमार्का बुझौ। समानताको पाठ सिकौ,सही र इमान्दार कुरा भए पशुको पनि अनुयायी बनौ। झुठो र असत्य,खराब कुरा भए त्यस्ता मान्छेको निती नियमलाई पनि बहिष्कार गरौ। यस्तै अनुभव र भावना लिएर मैले आजको अनुभुतिलाई यहाँहरु समक्ष अनुभुत गर्ने मौका छोपें। मैले अगाडि देखि बिन्ती भाव गरिरहेकी छु। मेरो बिचार सँग सहमत् हुनैपर्छ भन्ने छैन। यदी कमिकम्जोरी भए यस्मा छुटेका कुराहरुको सहि निर्णय दिने अभिभारा यहाँहरुलाई सुम्पेकी छु। अहो मेरो काममा जाने बेला भएछ। जागिर नै गयो भने त कसरी बाचेर यस्ता अनुभुती पोख्ने । लौ त जागिर बचाउन गए है! अर्को अनुभुती पोख्न नपाएसम्मलाई बिदा।
बेलैमा मृत्यु सित जिन्दगी साट्यो छोराले
गर्दिन भन्थ्यो रण्डी बाजी ढाट्यो छोराले ।
कलेजको निहुँ पारी घरबाट निस्कीएर
डान्सबारमा हुस्की तानी वेश्या नचायो छोराले ।
होटलपार्क बार क्याफे कुनै बाकी नराखी
दुखगरी कमाएको सम्पत्ति सकायो छोराले ।
यौवनको मातले एड्सको शिकार बनी
चढदो जवानी मै ज्यान गुमायो छोराले ।
धेरै पढी लेखी नाम राख्छ होला भन्थेँ
भाएको इज्जतपनि माटोमा मिलायो छोराले ।
मरेर गएपनि बाउको नाक काट्यो छोराले
हिजो आज दौंतरीमा अतित तथा आफ्नो दैनीकी लेखन निकै चलेको छ। हप्तामा एउटा भने पनि केही लेखुं भनेर लागेको नेपालमा डिजेल पावर हावसको अध्यन गर्दा गर्दै ड्राफ्ट पोस्ट अझै पुरा हुन सकेन। दौंतरीलाइ सजाउदा सजाउदै तथा लेखहरु पोस्ट गर्दा गर्दै बिदामा केही लेखु भन्यो दिमागमा केही फुरेन। हुन त दौंतरीमा रहेका फुलबुट्टा मेरो दिमागका उपज मात्र होइनन्। बिभिन्न सरसल्लाह दिनुहुने मित्र बाहेक महेश जि, म्याभरिक र ठरकी दादाले दौंतरीका फुलबुट्टा भर्नमा निकै काम खर्चिनु भएको छ। दौंतरी लेखकमा रहुनु भएका मित्र तथा फुटकर रुपमा लेख्ने मित्रहरुको सुचि त झन लामो छ।
लामो समय पछि आज खेमनाथ जि को लेख आउदा दौंतरीका पुराना दिन सम्झन मन लाग्यो। यसरी नया पुराना साथीहरु सक्रिय रहे पुराना दिन सम्झदा पनि निकै भावुक भइदोरहेछ। नेपाल र नेपालीको भाषा तथा संचारमा बिदेशमा रहेर सेबक बनी काम गर्नु पनि निकै आनन्द आउदो रहेछ। आशा छ सबै बिचार राख्ने मित्रहरु दौंतरीमा अटेर यो यात्रा नटुटाइ क्षितजसम्म पुग्ने छौं।
मेरो वेलकम पोस्टबाट सुरु भएको दौंतरी आज करिब ५०० पोस्टमा पुगिसकेछ। यस बिचमा थुप्रै खाले लेखहरु प्रकाशित भए राम्रा नराम्रा प्रतीक्रिया दिने मित्रहरु धन्यबादका पात्र हुनुहुन्छ। यो क्रमलाइ जारी नै राख्नुहोला। लेख्न मिले लेख्नुहोला नभए ब्लग पढेर कमेन्ट बक्समा आफ्ना बिचार भए पनि लेख्नुहोला। दौंतरी सामुहिक ब्लग रहेको हुंदा यांहा प्रशस्त ब्लगरको उपस्थीती हुन्छ। तर पनि दौंतरीको आसमान बाट अर्को आसमान सेतु जोड्न ब्लग भित्र ब्लग स्तम्भ ल्याएका छौं जहां अन्य ब्लगर साथीहरुको भलाकुसारी दौंतरीमा प्रस्तुत गर्ने छौं।
यस स्तम्भमा गत साता दिपक जडित हुनुहुन्थ्यो भने यस पटक सपना संसार रहुनु भएको छ।
साथीहरु माझ संचारको महत्ब र दुरुपयोगको बारेमा गफकै क्रममा सामुहिक ब्लगको मान्यता राख्दै दौंतरी खोल्ने प्रेरणा मिलेको थियो। साधारण ब्लगस्पटको ब्यानरबाट सुरु भएको दौंतरी अहिले थुप्रै अलंकार सहित तयार छ। कम्पियुटर सज्जा देखी लेख लेख्ने प्रेसित गर्ने तथा पढ्ने मित्रहरुले दौंतरीलाइ यांहा सम्म पुर्‍याउनु भएको छ। ब्यबसायिकता भन्दा पनि उत्कृष्टता तिर उन्मुख दौंतरीमा समुहका सदस्यका तर्फबाट उत्तम रचना तथा लगाबले दौंतरी सधै अब्बल रहिरहनुका साथै सामुहिक अमुल्य सम्पती रहन गयो। हामी अझै धेरै माथी पुग्नु छ तर हामी जांहा पुग्ने छौं, जस्तो अबस्थामा रहने छौं, दौंतरीको मुलमन्त्रलाइ कहिले भुल्नुहुदैन। हामीले सिधा तथा स्पष्ट बिचार तथा अन्य प्रस्तुती आफ्नो मिलेको समयमा सबै सामु बाड्दै जानुपर्दछ । दौंतरीमा प्रकाशित सामाग्रीलाइ प्रतिक्रिया दिए लेख्नेलाइ पनि हौसला बढ्ने छ तथा लेखको अर्को पक्ष पाठकबाट दर्शिने छ। तपाइहरु पनि दौंतरीमा फाट्ट फुट्ट रुपमा लेख लेख्ने भए या दौंतरी लेखक भएर रेगुलर लेख लेख्नको निम्ती dautari@gmail.com मा लेख या इमेल पठाएर जनताको ब्लग दौंतरीलाइ अझ बलियो र लोकप्रिय बनाउं।
मिनीसोटा, संयुक्त राज्य अमेरीका
गत डिसेम्वर १२, २००८ का दिन दुबईको एभरेष्ट ईन्टरनेश्नल होटेलमा बिहानै देखी नेपालीहरुको चहल पहल थियो । होटल बाहिर झुम्म झुम्म नेपालीहरु देखिन्थे । विगत १९९० साल देखि यूएईमा स्थापना भएको सबैभन्दा पुरानो नेपाली संस्था नेपाली समाजको आज चुनाव हुँदै थियो ।
लामो समयदेखी यहाँ रहदै आउनु भएका र उच्च पदमा कार्यरत बुद्धिजिवी नेपालीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यूएईको अबुधावी सारजाह अलेन र अन्य प्रान्तबाट नेपालीहरु उक्त चुनावमा भाग लिन आएका थिए । साच्चैनै त्यहाँको माहोल अति रमाईलो थियो । उक्त होटलमा नेपालीहरुले प्रत्येक हप्ता कार्यक्रमहरु गरीरहन्छन् तर उक्त दिनको कार्यक्रम बेग्लै थियो । साच्चै नेपालकै चुनावको झल्को दिन्थ्यो । प्रवासमा कार्यरत भएको करिव ६ बर्षको अवधिमा पहिलो पटक चुनावमा उपस्थित भएको थिए । यूएईमा स्थापना भएका विभिन्न नेपाली संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधीहरु र उक्त संस्थाले नेपाली समाजका उम्मेदवारहरुलाई भोट हाल्नको लागि चुनेका पार्षदहरुको बाक्लै उपस्थिति देखिन्थ्यो । पार्षदहरुले परिचयपत्र झुण्डाएको देख्दा नेपालकै याद दिलाउथ्यो । करिव मध्यान्ह १२ बजेदेखि सुरु हुने भनिएता पनि दिनको १ बजेसम्म पार्षदहरु हलभित्र छिरेका थिएनन् । नेपालीहरु एक आपसमा प्रवासमा पनि भोट खसाल्न पाईने भयो भनेर हर्षित देखिन्थे । सबैले आफुले मन पराएका उम्मेदवारहरुलाई जिताउने कुराहरु गरेको सुनिन्थ्यो ।
चुनावी हलभीत्र म पनि छिर्न खोजे मसँग चुनावी परिचय पत्र थिएन तर मलाई भित्र छिर्न दिईएन । यूएई छिरेदेखी म नेपाली समाजका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुँदै आएको थिए र विभिन्न कार्यक्रमका समाचारहरु पनि संकलन गर्दै आएको थिए । उक्त दिन पनि म चुनावको चहलपहलको समाचार टिपोट गर्न उपस्थित भएको थिए तर चिन्दै नचिनिएको ब्यक्ति जस्तो भए एक क्षण, कारण मसँग पार्षदको परिचय पत्र थिएन ।
चुनावी कार्यक्रम दिनको २ बजे देखि सुरु भयो । हलमा म पनि सोस्र फोस्र लगाएर छिर्ने मौका पाए । भित्र सबै पार्षदहरु उपस्थित भईसकेका थिएनन् । बिस्तारै पार्षदहरुको उपस्थित हुँदै गयो । उक्त चुनावी कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावासको प्रतिनिधित्वको रुपमा तृतिय सचिव जितेन्द्र लाभको उपस्थिती रहेको थियो ।
अध्यक्ष पदमा ३ जना समाजसेवीहरुको उम्मेदवारी परेको थियो । पूर्व नेपाली समाजका अध्यक्ष तथा समाजसेवी कृष्ण ढकाल, निवर्तमान नेपाली समाजका उपाध्यक्ष तथा समाजसेवी राजेन्द्र देवकोटा जनजाती महासँघका अध्यक्ष तथा समाजसेवी यम प्रसाद तमु । तिन जनाको बिचमा चुनावनै हुने भएको भए पार्षदहरुले एक पटक सोच्नै पर्दथ्र्यो कस्लाई भोट दिने भनेर तिनै जना ब्यक्ति नेपाली समाजलाई आवश्यक पर्ने ब्यक्ति थिए । तर अहिले सबै प्रवासी नेपालीहरुले नेपाली समाजमा नयाँ अनुहार चाहेका थिए र समझदारीमा कृष्ण ढकाल र राजेन्द्र देवकोटाले यम प्रसाद तमुलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिए यो अति सह्रानिय कार्य हो । यदि चुनाव भएको भए पछि एक दुई भोटको अन्तरालमा विजयी हुँदा नकारात्मक हल्ला फिजिन्थ्यो ।
उपाध्यक्षको लागि दुई जनाको आवश्यकता थियो उक्त पदमा ३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । नेपाली समाजका पूर्व महासचिव तथा निवर्तमान सदस्य लक्ष्मण सापकोटा नेपाल पत्रकार महासँघ यूएईका उपसभापति मान बहादुर थापा तथा आसिफ अलि सिद्धिकी अन्त्यमा नेपाल पत्रकार महासँघका उपाध्यक्ष मान बहादुर थापाले अन्य दुई जनालाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिए । महासचिव पदमा भने ३ जनाको भिडन्त हुने निश्चित भईसकेको थियो । नेपाल दुबई जनकल्याण राहतकोषका अध्यक्ष तथा पत्रकार महासँघ यूएई सम्पर्क शाखाका सदस्य धर्मेन्द्र यादव नेपाल पत्रकार महासँघका सदस्य तथा लुम्बिनी वेलफयर सोसाईटीका नारायण अधिकारी तथा जनप्रगतिशिल माच यूएईका उक्तम अधिकारी तिन जनाको अन्तिम समय सम्म पनि समझदारी भएको थिएन ।
विभिन्न बुद्धिजिवी तथा समाजसेवी नेपालीहरुले अन्तिम समय सम्म पनि समझदारी गराउने प्रयास गरिएको थियो । तिनै जना नेपाली समाजमा आउन आतुर देखिन्थे । अन्त्यमा नारायण अधिकारीलाई महासचिव उक्तम अधिकारीलाई सचिव र धर्मेन्द्र यादवलाई प्रवक्ता उक्त हलबाटनै घोषणा गर्ने भनि समझदारी भएपछि मात्र चुनाव हुनवाट रोकियो ।
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको निर्वाचन भएको घोषणा गरिसकेपछि महासचिव पदको घोषणा गर्न निर्वाचन समन्वय समितिलाई निकै कसरत गर्नु पर्यो । निर्वाचन समन्वय समिति लगायत अन्य बुद्धिजिवी तथा समाजसेवी नेपालीहरु सकेसम्म समझदारीमा जाने पक्षमा थिए भने उपस्थित पार्षदहरु भने भोट हाल्न आतुर देखिन्थे । निर्वाचन समन्वय समितिका प्रवक्ता डि।आर। गुरुङ्गले मत पत्र सम्बन्धि मतदाताहरुलाई जानकारी दिदै थिए भने बाहिर ३ जना बिच समझदारी हुँदै थियो । बिचैमा महासचिव पदका दावेदार धर्मेन्द्र यादवले उम्मेदवार फिर्ता लिए पछि अब दुईजनाबिच मात्र चुनाव हुने देखिन्थ्यो । अन्तिम समय सम्म पनि समझदारी भएको देखिन्थेन । तिनै जनाको समझदारी भएतापनि उक्त हलबाटनै घोषणा हुनुपर्नेमा ढिप्पी थिए भने निर्वाचन समन्वय समितिको आचारसंहितामा प्रष्ट खुलाईएको थियो निर्वाचन समन्वय समितिले ५ वटा पदमा मात्र निर्वाचन गर्ने र बाँकी रहेको पदमा अध्यक्षको रोहवरमा पहिलो बैठकमा चयन गर्ने भनेर तर त्यही हलबाट घोषणा गर्ने भनेर ढिप्पी गरेपछि सचिव र प्रवक्ताको पनि त्यहिहलबाट घोषणा गरियो ।
एकैक्षणमा हलमा चुनावी परिणाम आउन थाल्यो । नेपाली दूतावासका प्रतिनिधी तृतिय सचिव जितेन्द्र लाभले विजयी नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई अविर लगाई स्वागत गर्नु भएको थियो ।
चुनावी कार्यक्रम सकिसकेपछिको माहोल झनै हेर्न लायकको थियो । नवनिर्वाचित अध्यक्ष यम प्रसाद तमूलाई उहाँका शुभचिन्तकहरुले फूलमाला र अविरले स्वागत गर्दाको क्षण नेपालकै चुनावी मैदानमा चुनाव लडेर विजयी भएको क्षण जस्तो देखिन्थ्यो । प्रवासमा त्यो दृश्य अति हेर्न लायकको थियो ।
कोषाध्यक्षको पदमा निवर्तमान कोषाध्यक्ष रविन्द्र पौडेलको मात्र उम्मेदवारी परेको हुँदा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । लक्ष्मण सापकोटा र रविनद्र पौडेल बाहेक अन्य महत्वपूर्ण पदमा सबै नयाँ अनुहार आएका छन् । नयाँ जोस र जाँगर लिएर नेपाली समाजमा आएका नयाँ पदाधिकारीहरुको काँधमा करिव २ लाख प्रवासी नेपालीहरुको भार पर्ने छ । २ बर्षको लागि चुनिएको उक्त कार्यसमितिले नेपालीहरुको समस्याहरुदेखि लिएर अन्य धेरै कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । यूएईमा छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु र सम्पूर्ण नेपाली संघसंस्थाहरुलाई एउटै छातामुनी ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अब भावी नेपाली समाजले कस्तो कार्य गर्दछ त्यो त हेर्ननै बाँकी छ ।
- अशोक खलान को मान्छे
फ्रान्क्फर्ट , जर्मनी
रात झनै मध्यरातमा परिवर्तन हुँदैछ
बिहानि को आशामा सडकमा रगत बगाउनेहरु
अझै जँगल भित्र गायब हुँदै छन
यो औशीको लामो रात्री प्रहर
सम्झु त तुवाँलोले ढाकेको दिन
उज्ज्यालो निसाम्मै छैन सिर्फ उज्ज्यालोको स्तुतिमा
दिन झन रात जस्तै बन्दै छ
आशा को प्रती र किन गरीराखेका छौ
जनताका छोरा हरुलाई जनताले तर्साउन थाले पछी
जनताका छोराहरुले नै जनतालाई भ्रममा राखेपछी
विश्वासको प्रती ? किन बनायौ ?
अझै नेपाली आँखा पुत्र बियोगले बर्सिन्छ भने
दिन दहाडै डकैत अपहरण हत्या बडदैछ भने
जव जब जनताका छोराहरु सार्वभौम सत्ताका डिँगा मार्छन्
तब तब सार्वभौम जनता दिनदहाडै गेडिने गर्छन्
डिँगा मार्ने गेडने , गेडिने सबै सबै जनता
दु:ख झेल्ने आफ्ना गुमाउने , अधिकार बिहिन पनि जनता
कँहा फिराद पत्र लिएर जाने अव
------- चोर भन्ने ठाउँ छैन अव
हाम्रो फिराद पत्र बुझाउने ठाउँ छैन अव
त्यो ठाउँमा त डुकुलन्ट्ठु जनताका छोराहरु छन
जनता मार्दै डकैत गर्दै खाने हरु छन
दिन दहाडै अनेक उपनाम दिई लुटने हरु छन
रात मध्य रात को प्रहर बड्दो छ घडी रोकिएको छ
अव यस्तो लाग्छ कहिले उज्ज्यालो हुँदैन
पुन तियानमियान चोकको नियती नभोगी ।।
घडी रोकिएको छ जनदुहाइ सुन्ने श्रीपेच संग्राहलयमा छ
घडी रोकिएको छ सुशासन गर्ने राजदण्ड जनताको हात मा छ
अव राजदण्डले होइन बन्दुक को नाल ले शासन गर्दै छ
त्राश बढदो छ दिन निसासी लाग्दो कठोर
रात काल्रात्रीमा मडारिदै बज्रदै छ
अनेक झुण्डहरु को समुहले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउदै छ
जतातत्तै नरसिनोले नवइदियामिनको घोषणा गर्दै छ
साच्चै नै सान्ति क्षेत्रलाई नरबधशाला मा तब्दिल गर्ने हरु
सत्तसिन भै सकेका छन
घडी रोकीइ सकेको छ
नयाँ नेपालको नामले।
हो ---मैले अगाडिको अंकमा कुकुरको इमान्दारिताको बारेमा मैले देखेका कुरा लेख्छु भन्दैथिए। हुन त यो साधारण कुरा हो। सबैलाई थाहा भएकै हो ता पनि मलाई भने अनौठो लागेर नै मैले मेरो अनुभुती पोख्ने आज्ञा माग्दैछु। आज भन्दा केहीसमय अगाडि मैले काम गरेको रेस्टुराँमा केही कस्टमरहरु अन्धा पनि थिए। शायद उनिहरु कुनै कम्पनीमा काम गर्दथे। त्यसैले पनि उनिहरु बेलुकाको खाना खान ग्रुप भएर हप्तामा दुई पटक सम्म पनि त्यो रेस्टुराँमा आउने गर्दथे। उनिहरुलाई त्यहासम्म खै कस्ले ड्राइव गरेर ल्याउने गर्दथे त्यो त मलाई थाहा भएन, अनी मेरो फुर्सद पनि भएन कि उनिहरुलाई कस्ले त्यहासम्म छाड्दथे भनेर हेर्ने। तर भित्र रेस्टुरेन्ट सम्म उनिहरुलाई ल्याउने चाँही एउटा गजबको कुकुर थियो र ठीक्क टेबल सम्म ल्याइ दिएर उनिहरु नबसिन्जेल्सम्म त्यो कुकुर उभिरहन्थ्यो र उनिहरु बसिसकेपछी ऊ थपक्क टेबलमुनी छिरेर उनिहरुले खाइ नसकुन्जेल बसिरहन्थ्यो जब उनिहरुले खाइसके भनेर जाने पछी थपक्क टेबल बाट निस्कन्थ्यो। कस्तो अजिब !। पशुको पनि त्यस्तो बुद्धी त्यो कुकुरको त्यस्तो इमान्दारिता र बुद्धी देख्दा मलाई पूरानो आफ्नो घट्नाको याद आउँदथ्यो।
एकदिन म र मेरी छोरी खसिको मासु किनेर घरतर्फ फर्कदैथियौ। छोरीले प्लास्टिकको झोलामा मासु हल्लाउदै बोकेकी थिइ/हामी गफको शुरमा हिडिरहेकाथियौ कताबाट यौटा कुकुर हान्निएर आएर छोरीले बोकेको मासुको झोला उछिट्टियाएर लग्यो। हामी त अक्क न बक्क पर्यौ। के गर्ने ?खोस्न जाउ भने उल्टै त्यही कुकुरले टोक्ने हो कि ?। मन नै अमिलो भयो। त्यो बेलाको महङी भनौ नै खसिको मासु खान लाई दशै नै पर्खिनु पर्थ्यो। मफतमा २०० रु खेर गयो भन्दै हामी चुक चुक गर्दै घर फर्कियौ। अब सोचौ न कुकुर पनि हाम्रो देशका त कस्तो चलाख अनी लुचा। मान्छेको नै गन्ती नगरने। अब त्यही कुकुरले यहाँ अन्धोहरुको साहारा भएर कसरी उनिहरुको बैशाखी बनेर भरोसा दिएको त! । त्यही भएर पनि छोरा छोरीलाई भन्दा आगर गरेको हो कि ?अब हाम्रो देशमा हो भने मान्छेलाई त राम्रो अनुशासन छैन कहाबाट कुकुरलाई अनुशासित बनाउने ?त्यसरी नै खोसेर,लुटेर खाने बानी परिसक्यो वा मजबुरी नै भैसक्यो। कुकुरको त कुरै छाडौ। ल त पाठक साथीहरु समयले मलाई सजाय दिन आंटी सक्यो। अमेरिका को जीवन आफ्नो भनेर पनि धर पाइन्न त्यसैले अर्को अंकमा भेट्ने बाचा गर्दै।
हिर्काए, चुटे, पडकाए गोली हाम्रो देशमा
बौलाही खेले रगतको होली हाम्रो देशमा
सफाया भए नमान्ने जति मान्नेको उही गति
डरले करले बोक्नै पर्छ झोली हाम्रो देशमा
भोट पाउने जिते, नातालाई ताने, भए सरकार
अझै बाँकी छन् धम्कयाउने टोली हाम्रो देशमा
संविधान लेखने कापी र कलम विदेशी हातमा
अन्योलमै छन् कति, के होला भोली हाम्रो देशमा
Thank you for taking the time to submit our form.
If necessary, your Question/Query will be answered by our team member.
हामीलाई सम्पर्क गर्नु भएकोमा धन्यावाद । तपाईको सल्लाह सुझाव हामीसम्म पुगेको छ र आवश्‍यक देखिएमा हामी तपाईलाई सम्पर्क गर्ने छौं ।